काठमाडौँ । सोमबार लुक्ला विमानस्थलमा समिट एयरको जहाज दुर्घटना हुनबाट बालबाल बचेको छ। लुक्ला विमानस्थलमा अवतरण गर्ने क्रममा जहाजमा समस्या देखिएको हो।
लुक्ला विमानस्थलले जनाएको अनुसार अवतरण गर्दा एक्कासी टायर लग भएको जस्तो देखिएको र जहाज रन वेमा नै अड्किएको थियो। विमानस्थलका एक कर्मचारीका अनुसार जहाजको पछाडिको पांग्रा जाम भए जस्तो देखिएपछि जहाजको अगाडिको भाग उठ्न खोजेको थियो।
यो समस्या विमानमा ओभरलोड भएका कारण विमान सन्तुलन गुमाएर भएको पनि हुन सक्ने विमानस्थलले जनाएको छ । विमानमा धेरै यात्रुहरु हुनुका साथै धेरै सामान बोकेका करणले यस्तो भएको हुन सक्ने अनुमान विमानस्थलले गरेको छ। यद्यपि, यतिखेर यो के कारणले भएको हो भन्ने बारेमा अनुसन्धान भैरहेको बिमानस्थल प्रशासनले जानेको छ।
रनवेमा जहाजमा समस्या देखिएपछि पाइलटले केहीबेरमा जहाज बल्लतल्ल पार्किङस्थलमा पुर्याएका थिए ।
प्रकाशित : सोमबार, बैशाख ०३, २०७५१७:२६
डिल्लीबजार कारागारबाट अपराधी फरार
विरोधकाबीच प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा सुख्खा बन्दरगाहको शिलान्यास !
सशस्त्र प्रहरीद्वारा विभिन्न पदमा भर्ना आह्वान ! [आह्वानपत्रसहित]
चिकित्सा क्षेत्र सुधारको माग राख्दै पटक पटक अनसन बस्दै आएका डा. केसी एक्कासी अस्पताल भर्ना !
५१ सेकेन्ड अगाडि पत्रपत्रिका